IZArc compressor-decompressor. Etu esi wunye IZArc ihe compressor otutu di iche iche ma chefuo WinRar | Akụkọ akụrụngwa
Hụbọchị ole na ole gara aga m na-ekwu banyere ya compres na na isiokwu ọ kọwara ihe a Compressor bụ na ihe ọ bụ maka. Ọ bụrụ na ị gụọ isiokwu ị ga-echeta na ọ kwuru ụfọdụ ndị a maara nke ọma compressors ma akwụ ụgwọ dị ka Winzip o Winrar ma kwukwara mmadụ abụọ nwere onwe ha dịka ndị a 7-Zip ma ọ bụ IZArc. Ọfọn, taa anyị ga-ahụ otu esi etinye nke ikpeazụ, ihe IZArc, nke bụ a kpam kpam free Compressor-decompressor na Spanish.
IZArc dakọtara na Windows 98 / NT / 2000 / XP / 2003 na Windows Vista. Na mbụ a Compressor bụ dakọtara na Windows Vista ma ebe ọ bụ na Ntughari IZArc 3.8.1510 ọ na-arụ ọrụ zuru oke na ụdị 32-bit nke Vista. Yabụ ọ bụrụ na ịnwere nke sistemụ arụmọrụ ndị a arụnyere na kọmpụta gị, ọ gaghị adị gị mkpa ịnweta ihe ọ bụla ịchọrọ iji nwee ike iji IZArc.
SỌ bụrụ n ’ikpebibeghị ịwụnye IZArc, a ga m echetara gị na ọ bụ n'efu, na ịkwesighi igbo mkpa ọ bụla maka nrụnye yana na ewezuga Spanish ọ nwere ihe karịrị asụsụ iri anọ. Izarq bụ compressor nke ga - enyere gị aka rụọ ọrụ mkpakọ-decompression niile dị mkpa na faịlụ gị na-enweghị akwụ ụgwọ penny. Ị nwere ike:
zip na wepu
mepụta faịlụ mpikota onu (site na ịpị aka abụọ) iji zigara ndị enyi gị ozi site na mail ka ha nwee ike imeghe ha na-enweghị ihe nrụnye ọ bụla na kọmpụta ha.
kewaa faịlụ n'ime otutu akụkụ
sonye na faịlụ e kere n’ime otutu chunks
ị nwere ike izo ya ezo na paswọọdụ gị abịakọrọ faịlụ iji chebe ha si prying anya
mmezi emerụ abịakọrọ faịlụ
na ọbụna tọghata faịlụ n'etiti dị iche iche mkpakọ formats
BEchere m na ị kwenyeworị ọkara gbasara omume ọma nke IZArc. Chefuo WinRAR na WinZIP ma nabata nke gị dochie IZArcGini mere iji kwụọ ụgwọ maka otu mmemme mgbe onye ọzọ na-eme otu ihe ahụ n'efu? Ka anyị malite site na ntinye nke IZArc:
Nke 1) Ihe mbụ ị ga - eme bụ ibudata mmemme ahụ. I nwere nhọrọ abụọ, site na Softonic site na ịpị ebe a, ma ọ bụ site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke IZArc. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-ebudata ụdị ihe omume kachasị ọhụrụ, nke bụ ugbu a 3.81.1550. Cheta na IZArc bụ n'efu, yabụ ị nwere ike ndudue site na nke ọ bụla n'ime ibe abụọ a ma jiri ya n'efu. Ntinye ga-eme na Bekee mana ọ dị mfe ma na njedebe nke nwụnye anyị nwere ike itinye mmemme ahụ n'asụsụ anyị chọrọ.
Nke 2) Mgbe anyị nwere ihe omume ebudatara, anyị ga-pịa ugboro abụọ na faịlụ na IZArc echichi ga-amalite. Na mpio izizi pụtara, ha nabatara anyị na Bekee ("Wellcome to the IZArc 3.81. ...") anyị ga - pịa "Ọzọ>" windo nnabata ikike onye ọrụ ga - apụta:
You maraworị na iji mmemme ị ga-ekwenye na ọnọdụ nke ndị okike ya nyere, yabụ gụọ ikike (na Bekee) ma ọ bụrụ na ị kwenyere, lelee nhọrọ "Anabatara m nkwekọrịta ahụ" wee pịa «Osote> ».
Nke 3) Window ọzọ ga-emeghe nke ị ga - pịa ọzọ na «Osote>» na na windo ahụ ga - emeghe ọzọ, pịa «Osote>». Ga-abịa na windo akpọrọ "Họrọ Ọrụ Ndị Ọzọ":
Lee ị nwere nhọrọ abụọ. Nwere ike ịmepụta akara ngosi na ogwe ngwa ngwa ngwa ngwa («Mepụta akara ngosi ngwa ngwa») ma ọ bụ mepụta akara ngosi IZArc na desktọọpụ («Mepụta Desktọpụ akara ngosi»). Họrọ nhọrọ ndị masịrị gị site na ịlele igbe kwekọrọ. Wee pịa bọtịnụ «Osote>».
Nke 4) Na windo ahụ ga-emepe, pịa "Wụnye" na nwụnye ga-amalite. Mgbe o mechara, windo nhọrọ asụsụ ga-emeghe. Họrọ asụsụ ị chọrọ maka IZArk site na ịpịgharịa na ogwe nke gosipụtara n'akụkụ aka nri nke windo ahụ. Mgbe ahọpụtara asụsụ, pịa “OK”.
Nke 5) Mgbe ịpịrị "OK", windo "Nhọrọ" ga-emeghe na akpaghị aka n'asụsụ a họọrọ, ebe ị nwere ike ịme mgbanwe dị iche iche na ntọala mmemme. N'oge anyị ga-pịa "Nabata" ma anyị ga - aga n'ihu na nrụnye. N'ime akwụkwọ ntuziaka dị elu nke m ga-akwadebe n'oge na-adịghị anya, anyị ga-ahụ ihe nhọrọ ndị a bụ maka otu esi ahazi mmemme ahụ.
Nke 6) Mpio nwụnye ikpeazụ ga-emeghe, na-agwa anyị na arụnyela IZArc. Wepu igbe "Lee Gịnị bụ nke ọhụrụ" ma ọ bụrụ na ịchọghị ịgụ faịlụ ederede na mmelite ndị ewepụtara na mmemme ahụ (ọ bụ n'asụsụ Bekee) wee pịa "Emecha" ka ị gwụchaa.
BỌfọn na nke a na i mechaworị echichi nke a oké Compressor na-eje ozi dị ka nke zuru okè free ọzọ na-akwụ ụgwọ WinRAR Compressor. O nwere ike ịbụ na ị pịa bọtịnụ "Emecha" na windo ikpeazụ, ihe nchọgharị Internetntanetị gị ga-emeghe ma jikọọ na nkebi site na akwụkwọ IZArc gọọmentị ebe ha na-akọwa, n'asụsụ Bekee, otu esi enye onyinye afọ ofufo nye ndị okike nke IZArc. Mee onyinye ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụ naanị mechie windo ahụ.
EEnwere m olile anya na ị ga-enweta ọtụtụ ihe omume a site na enyemaka nke obere akwụkwọ ntuziaka a, m ga-emezue nkuzi nke adịghị anya nhazi na ojiji nke IZArc otú i nwere ike iri uru nke niile atụmatụ nke a magburu onwe free Compressor. Ruo mgbe ahụ ekele vaịn vaịn.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » IZArc compressor-decompressor. Etu esi wunye IZArc ihe compressor otutu di iche iche ma chefuo WinRar
Edemede mara mma yana nke ọma, ọ nyeere m aka ikpebi ịwụnye IZArc, agbalịrị m ya ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ndewo Marvin, daalụ maka okwu gị na nleta gị. Peeji nke dị n'aka ekpe bụ maka ebumnuche mmemme, etinyere peeji niile na-enweghị tebụl (belụsọ maka mpaghara ole na ole) ma amalitere m itinye aka ekpe n'akụkụ ka m nwee ike itinye
. Ozugbo m nwere oge, m na-eziga ya na etiti ahụ, ebe ọ bụ na ọ masịrị m na mpaghara ahụ.
Ekele kachasị ekele.
Daalụ, ọkacha mmasị m na-egbu egbu. Ọzọ nkọwa bara uru. Ekwenyere m na gị: IZARC bụ nhọrọ magburu onwe ya, jupụta na ịnwegharị zip ma ọ bụ rar kwa oge ọ bụla.
Na ihe niile a, ebe ọ bụ na ọ bụ oge mbụ m na-ede, ekele maka usoro agụmakwụkwọ a. Ọ bụrụ na m matara weebụsaịtị a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ gara aga, mgbe m malitere iji kọmputa na-egwu egwu na karịchaa ịfụfụ Net.Ọ ga-aba nnukwu uru na mmadụ nwere onye ọ bụghị naanị mara, mana ọ na-ekwupụta onwe ya nke ọma ma jiri ọmarịcha azaghachi mmuta. Chapeau.
Site n'ụzọ, maniac na m bụ, gịnị kpatara ị jiri họrọ iwebata peeji ahụ n'akụkụ aka ekpe ma ọ bụghị na etiti etiti?
Naanị otu ajụjụ, ị ga-ewepụ Winrar iji budata Izarc? I meela nke ukwuu
Enweghị papino, ịnwere ike ịwụnye ma jiri nke ọ bụla mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Daalụ ụmụ nwoke, mana ị gaara eme ya ka ọ zuo oke, amaghị m otu esi zoo, mezie, nwalee faịlụ ndị abịakọrọ, ụmụ nwoke na-ekele ...
Ihe niile ga-abịa n'oge oge Queni 😉
eme hdz dijo
nduzi na otu esi agbatu faịlụ na ndọtị .gz na-ajụ m maka olu m 0 wee jụọ m olu id -1 ojsal nwere ike inyere m aka… .thanks
Zaghachi ka emegharia hdz
Enyi, nsogbu i nwere bụ na ị na-efu akụkụ nke faịlụ. Ruo mgbe ị nwere ha niile, ị gaghị enwe ike decompress.
Ekele m ekele gị nke m kachasị amasị gị. hey m nwere iwepu ihe ochie m Compressor ma ọ bụ ọ na-eme otu ihe ahụ?
Nwere ike ma compressors arụnyere n'otu oge na ọ dịghị ihe na-eme. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ inwe naanị otu, ị ga-ewepụ nke ọzọ n'onwe gị.
Lee ezigbo peeji, achọtabeghị m ya mbụ, echere m
Ezigbo ihu ọma gị ịme ka anyị mata ya, ọ sitere na -
enyere aka dị ukwuu n'ihi na ị na-akọwa ya n'ụzọ ọ bụla ọ dị -
kwere nghọta, M ga-ele anya maka nkuzi gị.
Ndewo, m wụnye ihe omume ahụ ị na-ekwu ebe a izarc mana mgbe m budatara ọtụtụ ihe nkiri na .RAR usoro ọ naghị ekwe ka m mepee ha na mmemme a na amaghị m ihe kpatara m ji enweta njehie, agbalịrị m ihe nkiri 4 dị iche iche. ndị ọzọ Ọ B IFR IF na ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka ha ma ha na-ewepụ ya mana ya na winrar. Biko nyere m aka, nye m usoro nhazi nke otu m ga-esi wepụ ya ma ọ bụ ụfọdụ ịkwụ ụgwọ n'efu ebe ọ ka mma kọwara. Biko za m ngwa ngwa o kwere mee. Imeela nke oma
Zaghachi na davidtenrife
Na-anu ka m ga-esi mpikota onu file na programmụ a! ????
Daalụ, ị nyeere m aka, enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka ọzọ
n'ihi na ha akọwaghị otu usoro eg
Ndewo, obi dị m ụtọ na ị tinyere peeji a, ebudatara m ya ma enwere m olileanya na onye decompressor a dị mfe iji karịa mmeri rar ma ọ bụ merie zip n'ihi na aghọtaghị m
Zaghachi abdiel Gg
Ha bu ndi nzuzu ibuli elu na adighi m ewetara ihe ya na akara ngosi aputaghi
psss nwatakiri ihe iju net ahu aghotaghi loc
gini ka okwuru
ma ọgụ ha lụrụ mana ọ nweghị nke a tọhapụrụ, ha anaghị eme gị ihe a
HHoLA !! Daalụ nke ukwuu !! Nzo ukwu obula bu ezigbo enyendible ma nyere aka !!! imeela nnọọ caapo !!!
Mmanya, ọ bụ ezigbo mmemme mana ọ bụrụ na m winrar arụnyere, enyere m aka itinye ya ma ọ bụ na m ga-enwe nsogbu na draịvụ ike m, Daalụ
diskulpen Enwerem nsogbu! Enweghị m ike iwepụta ihe nkiri na-agbadata n'akụkụ 8! ọ na-agwa m olu id 0! M ga-enwe ekele km enyemaka !!